Dagaal culus oo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka Kenya | KEYDMEDIA ENGLISH
Dagaal culus oo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka Kenya
Ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa khasaare kala kulmay Al-Shabaab weeraradii ay ku qaadeen saldhigyada ay ku leeyihiin Jubaland, waxaana ka mid ah weerarkii Ceel-cade oo ay ku dhinteen boqollaal askar ah, halka qaar kalena ay qafaasheen.
KISMAAYO, Soomaaliya - Dagaal culus ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya kaas oo u dhaxeeyay ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo dagaallamayaasha Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degaanka Hoosingow. Dadka degaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta labada dhinac is dhaafsanayeen, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah.
Ciidamada Kenya ayaa iska caabiyay weerarka sida wararku sheegayaan, waxayna dib u riixeen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday, kadib israsaaseyn saacado badan socotay oo xalay dhacday. Faahfaahinta khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray ayaa weli ah mid aan caddeyn.
Ciidanka Difaaca Kenya, [KDF] ayaa u soo tallaabay Soomaaliya sanadkii 2011-kii, kadib markii kooxda Al-Shabaab afduub u geysatay laba dalxiisayaal ajnabi ah oo ku sugnaa kowntiga Lamu iyo samafalayaal ka socday Dhadhaab oo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Sanad ka dib, ciidamada Kenya waxaa lagu daray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), oo ah ciidan loo sameeyay in ay Soomaaliya ka caawiyaan xasilinta iyo la dagaalanka Al-Shabaab, howl-galkaas hadda waqtigiisu wuu idlaaday, waxaana lagu baddela Howl-gal cusub oo isku dhaf ah.